Fomba ahoana no mahatonga ny fiovam-po amin'ny varotra | Martech Zone
Talata, Desambra 11, 2012 Douglas Karr
Ahoana raha azonao atao hampitombo ny fiovam-po amin'ny 391% amin'ny fanovana zavatra tokana momba ny fizotry ny varotrao? Leads360 dia nahita ny fomba hanaovana izany… Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoana ahodinanao dia mila mifandraika amin'ilay prospect ny olona varotrao. Fitaovana enablement mivarotra mitarika ny tahan'ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fizotrany mba hifandray sy hanidy ny vinavinanao rehefa vonona ny hividy izy ireo!
Ity ny infographic: Fomba fivarotana izay mampiroborobo ny fiovam-po
Raiso ny valiny sy ny data feno hapetraka amin'ny orinasanao, alaina ny kopian'ny tatitra, Ny tetika farany ifandraisana: Ahoana ny fampiasana tsara indrindra ny telefaona sy ny mailaka ho an'ny fahombiazana amin'ny fifandraisana sy ny fiovam-po.
Tags: fiovam-ponymailakavarotra ivelanytelefaoninaFanamafisana ny varotra